महिला विशेष – Halkaro
काठमाडौँ । स्वयम्भूको तल्लो फाँटस्थित डल्लु चौतारानजिकै छिँडीजस्तो डेरामा ३४ वर्षीया सन्तोषी नेपाली भेटिइन् । उनलाई अरूका घरको धन्दा, होजियारी कम्पनीको ज्यालादारी काम र काखका दुई छोराको हेरविचार गर्नै भ्याइनभ्याई छ । यहीबीचमा उनलाई बुधबारदेखि फेरि जिल्ला अदालत धाउनु परेको छ । छोरीको बलात्कारपछि हत्या घटनामा न्यायका निम्ति भौंतारिइरहेकी सन्तोषीको सोतोजस्तो कोठामा कपडा, खानेकुरा, ग्यास, पानी बोटल, जुत्ताचप्पल […]
अमृता अनमोल रूपन्देही । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा २०७४ साउनको एक दिन रुपन्देही, देवीनगरकी १२ वर्षीया बालिकाको उजुरी प¥यो । उजुरी आफ्नै बाबुविरुद्ध थियो । बालिकाको उजुरीमा घरायसी झैंझगडा सम्बन्धी विषय उल्लेख भए पनि प्रहरीले जब उनलाई आफूले भोगेका समस्या ढुक्कसँग राख्न सक्ने वातावरण बनाइदियो, एउटा कहालीलाग्दो सत्य बाहिर आयो । ती बालिका आफ्नै बाबुबाट […]
चितवन । जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखकी उम्मेदवार रेणु दाहालविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत गाली बेइज्जती गर्ने दुईजना विरुद्ध किटानी जाहेरी परेको छ । दाहालका श्रीमान् अनिलकुमार पाठकले निरब ज्ञवाली र एसबी बोहोरा विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका हुन् । चितवनका प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापाले दुई जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको शनिबार जानकारी दिए । सामाजिक सञ्जालमा […]
राजनीतिक चेतना त बढ्यो तर महिला नेतृत्व अझै अस्वीकृत
प्रकाशित मिति : २०७३, २५ पुस सोमबार January 9, 2017
व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र राष्ट्रप्रमुख पदमा महिलालाई देशले स्वीकार गरे पनि अझै पनि नेपाली समाजका विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको नेतृत्व सहजै स्वीकार गरिँदैन । सुनसरी । तेह्रथुम पिप्लेकी नर्वदा सिग्देल सुवेदीले आफ्नो घरको रेखदेख र आमाको समेत स्याहारसुसार गर्नुपर्छ । तेह्रथुम सदरमुकाममुनिको उराठे गाउँमा एक्लै बस्ने आमाका एक मात्र छोरा नर्वदाका दाइ वैदेशिक रोजगारमा गएकाले उनले आमालाई […]
‘इन सर्च अफ देवकी’ कसरी खोजियो देवी ?
प्रकाशित मिति : २०७३, २४ मंसिर शुक्रबार December 11, 2016
यतिखेर राजधानीमा किम्फ चलिरहेको छ । यही फिल्म फेस्टीवलमा एउटा इतिहास खोतल्ने प्रयास भएको छ, देउकीको । सुदुर पश्चिमका जिल्लाहरुमा व्याप्त देउकी प्रथाकोबारेमा सुदुरपश्चिममा हुर्किएकी पत्रकार देवकी विष्टले इतिहास र वर्तमानको चिरफार गर्ने प्रयास गरेकी छिन् ‘वृत्तचित्र इन सर्च अफ देवकी’मा । आइतबार देवकीको ‘इन सर्च अफ देवकी’ प्रदर्शन हुँदै छ । यही सेरोफेरोमा देवकीले […]
१२ देखि १६ वर्षको उमेरबीच ४३ हजार पटक वलात्कृत यी चेली
प्रकाशित मिति : २०७३, २२ मंसिर बुधबार December 7, 2016
कार्ला ज्यासिन्टो, १२ वर्षको उमेरमा वेचिइन् । अहिले २४ वर्षकी उनी मानव तस्कर विरूद्धको अभियन्ताको रूपमा उदाएकी छन् । मेक्सिकोकी यी चेलीलार्इ उनी १६ वर्ष हुँदा उद्दार गरिएको थियो । यो चार वर्षको अवधीमा उनी ४३ हजार पटक बलात्कृत भइन् । उनले सनसनी पूर्ण कुरा एक अन्तर्तवर्ताको क्रममा भनेकी छन् । दैनिक ३० जनासम्मेले बलात्कार […]
एउटी अामाको पीडाः बूढेसकालको साहरालार्इ अार्यघाटमा विसाएर म कसरी फर्कुँ?
बुढेसकालमा सहार पाइएला भन्ने थियो । साहाराको त्यही लाठी नी दैबले चुडाएर लग्यो । उनको नाम हर्कादेवी । जसको अर्थ खुसीकी देवी हुन्छ । बझाङी भाषामा हर्काको अर्थ हुन्छ ‘खुशी’ हो । तर यीनै खुसीकी देवीको खुसी बुढेसकालमा तिनै दैवले चुडेर लगेका छन् । भेनस अस्पतालको ४०१ नम्बर कोठामा यीने खुसीकी देवी अहिले अश्रुधारा नयनमा […]
सर्वोच्चबाट न्याय पाइन् पूजाले, बलात्कारी बाबुलार्इ १८ वर्ष जेल सजाय
काठमाडौँ, मंसिर ९ । आफ्नै छोरीलार्इ बलात्कार गर्ने एक जनालार्इ सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै फैसला सुनाएको छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला पनौती–२ सुब्बागाउँका प्रकाशबहादुर कार्कीलाई बिहीबार सर्वाच्च अदालतले पनि दोषी दोषी ठहर गर्दै १८ वर्ष कैद र दुर्इ लाख क्षतिपूर्ती भराउने फैसला गरेको हो । न्यायधिशद्वय जगदिश शर्मा पौडेल र शारदा प्रसाद घिमिरेको इजलासले कार्कीलार्इ […]
प्रकाशित मिति : २०७३, २८ कार्तिक आईतवार November 13, 2016
बाबुआमाले सानैमा छोरीको विवाह गरिदिनाले मधेसी समुदायका थुप्रै किशोरी पीडित छन् । उमेर पुग्दा–नपुग्दै केटाले अस्वीकार गर्न थालेपछि अहिले धेरैजसो यस्ता किशोरी माइतीमै बस्न बाध्य छन् । रूपन्देही । करौता– १ की मीना हरिजनको सात वर्षको उमेरमा दयानगर बगाहाका हरुद्वार हरिजनसँग विवाह भयो । विवाह भएर गौना भएको तीन वर्षपछि उनी घर निकाला भइन् । […]
महिलाको हातमा स्टेरिङ ‘झापा–काठमाडौं ! काठमाडौं झापा !!’
झापा । छोटो दुरीमा मात्रै महिलाले भाडाका सवारी चलाइरहेका बेला मोरङ मधुमल्ला तोरीबारीकी लक्ष्मी पाण्डेले नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेकी छिन् । उनले झापा-काठमाडौं यात्रा गर्नेहरुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन् । हाल झापाको दमकमा बस्दै आएकी लक्ष्मी झापा-काठमाडौं रुटमा सञ्चालन हुने मे १ ज २१६३ नम्बरको टाटा सुमो चलाउँछिन् । उनी सम्भवतः लामो दुरीमा सवारी […]